RSA भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » आर बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» आरएसएस
RSA को संक्षिप्त रूप हो रिवेस्ट शमिर एडलेमन.
RSA एक सार्वजनिक-कुञ्जी क्रिप्टोसिस्टम हो जुन सुरक्षित डाटा प्रसारणको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सन्देशहरू सार्वजनिक कुञ्जीसँग इन्क्रिप्ट गरिएका छन्, जुन खुला रूपमा साझेदारी गर्न सकिन्छ। RSA एल्गोरिदमको साथ, एक पटक सार्वजनिक कुञ्जीसँग सन्देश गुप्तिकरण गरिसकेपछि, यसलाई निजी (वा गोप्य) कुञ्जीद्वारा मात्र डिक्रिप्ट गर्न सकिन्छ। प्रत्येक RSA प्रयोगकर्तासँग तिनीहरूको सार्वजनिक र निजी कुञ्जीहरू समावेश भएको कुञ्जी जोडी हुन्छ। नामले सुझाव दिन्छ, निजी कुञ्जी गोप्य राख्नुपर्छ। संक्षिप्त RSA रोन रिभेस्ट, आदि शमिर र लियोनार्ड एडलेम्यानको उपनामबाट आएको हो, जसले सार्वजनिक रूपमा 1977 मा एल्गोरिदम वर्णन गरे।